Xog badan oo ku saabsan Imaamkii Soomaaliga ahaa ee meydkiisa laga helay magaalo ka tirsan Maraykanka? – Xeernews24
25. Dezember 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Alle ha u naxariistee waxaa xalay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masajidka Abuu Hureyra ee magaalada Colombus ee dalka Maraykanka, sidoo kalena ahaa Xoghayaha Golaha Imaamyada Waqooyiga Ameerika ee Ayanna.
Sheekh Maxamed Xasan Aadam ayaa la waayay Arbacadii 7-dii fiidnimo xilliga Soomaaliya, waxaana markii ugu dambeysay lagu arkay Masjidka Al Hureyra.
“Waxa uu ahaa nin hoggaamiye ah, oo dabeecad fiican afgaaban oo sadaqo badan inta badanna arrimaha ijtimaacigaa ka shaqeeya ayuu ahaa. Shiikh Maxamed runtii waxa uu ka baxay umadda soomaaliyeed Jaaliyada Maraykanka iyo Umadda Islaamka ah. Waxa uuu caan ku ahaa in uu dacwadda dadka aan islaamka ahayn gaadhsiiyo maaddaamo uu afaf badan ku hali jirey.” ayuu sii raaciyey Shiikh Cabdalla.
Halka sida oo kale uu qayb ka ahaa aasaasidda barnaamij ciyaareed oo dhallinyartu ka qayb qaataan oo isugu jirey gubadda gacanta iyo kubadda cagta.
Ohio waxay martigelisaa Soomaalida labaad ee ugu badan marka laga reebo Minneapolis ee Maraykanka.Imaam Sheekh Maxamed Xasan ayaa ahaa ganacsade caan ka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, OH.
Geeridiisu waxay noqon doontaa mid naxdin u leh qoyskiisa iyo Jaaliyadda Muslimiinta ee Columbus.
Dawladda Jabuuti oo soo bandhigtay Maraakiib dagaal oo ay soo iibsatay (Saw... Petition Free Abdi-Hamid Humad Dirane Campaign.